ကက်ဆိုဝါရီငှက်ကုလားအုပ်ပု - ဝီကီပီးဒီးယား
တောင်ပိုင်း ကက်ဆိုဝါရီငှက်ကုလားအုပ်ပု Brevardတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်, အမေရိကန်နိုင်ငံ
ကက်ဆိုဝါရီငှက်ကုလားအုပ်ပု (Cassowary) တို့သည် မပျံသန်းနိုင်သော ငှက်ကြီးများမျိုးစုတွင် ပါဝင်သည်။ သူတို့သည် ရက်တိုက် (ratites) ဟုခေါ်သည့် ပျံသန်းခြင်းမရှိသော ငှက်အုပ်စု တွင် ပါဝင်သည်။ ငှက်ကုလားအုပ် နှင့် ကီဝီငှက်အသေးစားတို့မှာလည်း ရက်တိုက်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သည်။
ကက်ဆိုဝါရီတို့သည် နယူးဂီနီနှင့် ဩစတြေးလျ အရှေ့ပိုင်းရှိ မုတ်သုံသစ်တောများတွင် နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် လူတို့နှင့် ထိတွေ့ရန် ကြောက်ရွံ့ပြီး တောနက်ထဲတွင် နေထိုင်လေ့ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် ဒေါသထွက်လေ့ ရှိပြီး လူတို့ကိုလည်း တိုက်ခိုက်လေ့ ရှိသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် သူတို့အကြောင်းကို လေ့လာရန် ခက်ခဲသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Brisson, Mathurin Jacques (1760). Ornithologie, ou, Méthode contenant la division des oiseaux en ordres, sections, genres, especes & leurs variétés (in French and Latin). Volume 1. Paris: Jean-Baptiste Bauche. Vol. 1, p. 46, Vol. 5: p. 10, Plate 1 fig 2, 19/11/2018.
↑ The Cassowary (html)။ Plants and Animals in the Wet Tropics။ 23 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2009-01-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကက်ဆိုဝါရီငှက်ကုလားအုပ်ပု&oldid=623218" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၂:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။